Isi nri ara – Ndị aghụghọ egwuregwu ụlọ oriri na ọṅụṅụ onye isi nri&Mbanye anataghị ikike – Gam akporo Ndị aghụghọ Atụmatụ
Isi nri ara – Ndị aghụghọ egwuregwu ụlọ oriri na ọṅụṅụ onye isi nri&Mbanye anataghị ikike
Kwadebe 🔪, sie nri 🕑 wee jee ozi 🍕 nri dị ụtọ sitere n'akụkụ ụwa niile 🌎 na Isi nri!
Bụrụ onye isi nri 👨‍🍳 ị na-achọbu ịbụ! N'afọ a ọ bụ egwuregwu njikwa oge na-eri ahụ nke ukwuu ga-ewetara gị ahụmịhe isi nri ka mma!
Nweta onwe gị na ezigbo nri nri. Esi nri dị ka ị bụ onye nzuzu na-esi nri na isi nri! Ahụ ọkụ isi nri jidere ma ị gaghị ezuru 🍨 egwuregwu esi nri? Mgbe ahụ nke a bụ egwuregwu esi nri maka gị! Ị ga-enye ndị ahịa agụụ nri nri dị ụtọ 🍩 n'ụlọ nri dị ịtụnanya n'ọsọ ọsọ ⏩. Enweghị ihe ịma aka nke na-enweghị ike imeri gị.
Dash site na ụlọ oriri na ọṅụṅụ gaa na ụlọ oriri na ọṅụṅụ na maapụ anwansi a. You will discover and mepee many places as you progress on your journey. 🌄 Weghachite ụlọ oriri na ọṅụṅụ ndị ahụ ma na-adọta ọtụtụ ndị ahịa. Ka ara Isi nri malite!
Mepụta usoro nri gị na nka njikwa gị 🍽. Kpatụ ngwa ngwa ka ị nwere ike ka ị na-elegide oge anya. Ime efere abụbeghị ihe na-atọ ụtọ ma na-atọ ụtọ! Gbalịa ngwa kichin niile nwere ike 🍳 iji kwalite ikike isi nri gị. Kwalite efere na ngwa kichin maka ahụmịhe egwuregwu ka mma!
Hụ ntakịrị ihe na-atọ ụtọ na egwuregwu isi nri gị? Na-aga n'ihu na oge ọsọ ọsọ, ka mma na njikwa oge 🛎. Egwuregwu esi nri a na-enye ọkwa ọchị na-adịghị agwụ agwụ yana ọrụ ịma aka edobere na ọkwa ọ bụla iji nye gị ahụmịhe ahụ pụrụ iche.
Kedu ihe ndị ọzọ FUN na-eweta egwuregwu a?
– Esi nri & Njem chọpụta ọtụtụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ ọhụrụ dị iche iche 🍴
– Nweta Combos wee nweta nnukwu ndụmọdụ ka ị na-egosipụta nkà ị na-esi nri 💰
– Mepee ụlọ oriri na ọṅụṅụ ọhụrụ site na ịnakọta kaadị igodo zuru oke 🌮
– Kwalite kichin gị na ọkwa elu ka ọ bụrụ Mad Chef ama ama! 💵
– Kpatụ pụọ n'ọtụtụ ọkwa egwuregwu 🍖
– Zuru oke ọrụ pụrụ iche na mmezu ya iji nwetakwuo 🎁
– Ma leba anya na ọtụtụ mmelite ndị ọzọ na-abịa! Mmmmmmmmmm
Tinye okpu Chef ahụ ma nweta nri! Budata n'efu taa wee sonye na isi nri! ♥️
Soro anyị na ibe fanpage: https://www.facebook.com/cookingmadness.chef
Atiya: Ndị aghụghọ na mbanye anataghị ikike ma ọ bụ Atụmatụ Mkpado: CheatsHack, Chefs, isi nri, Egwuregwu, Madness, Restaurant
← Onye dike Ragdoll – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike Ikwesighi 2 – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike →